SEO: Beingbụ na nsonaazụ bụ naanị ọkara agha | Martech Zone
Sunday, June 21, 2009 Satọde, 20 Juun 2009 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ folks na-eme ihe niile kwesiri iji nweta saịtị ha na peeji nsonaazụ njin ọchụchọ mana ha anaghị ahụ nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụrụ na ị na-ele nsonaazụ ọchụchọ gị na uto na Google Analytics na ị naghị ahụ ọtụtụ okporo ụzọ - ị nwere ike ịchọ igwu ntakịrị.
Itinye onye ọbịa ọhụụ bidoro na peeji nsonaazụ njin ọchụchọ. You no na peeji nsonaazụ ọchụchọ ahụ maka isiokwu ndị ga-emegharị okporo ụzọ? Ọ bụrụ na ị nọ na peeji nchọta njin ọchụchọ, na-ndị mmadụ na ịpị site na ndị na-arụpụta na gị na saịtị ma ọ bụ blog?
Gaghị ahụ ozi a n’ime gị nchịkọta ngwugwu, mana ị ga-ahụ ya n'ime Njikwa Nchọta Google (Webmaster nke Bing enweghị nke a). Google Search Console na-enye gị mmebi nke nsonaazụ ọchụchọ ị depụtara na ọnọdụ gị… na nsonaazụ ndị folks na-apị na.
Ọ bụrụ n'ịchọta na ị nọ n'ọtụtụ nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụghị na ịpịrị ya, ọ bụ ihe ị kwesịrị ịrụ ọrụ na idozi site na ịde aha kachasị mma (ma ọ bụ blọgụ post post) na ole na ole na-adọrọ adọrọ, ahịrịokwu bara ụba. Nke a bụ nsonaazụ njin ọchụchọ maka Geotag gị Blog:
Rịba ama ka nsonaazụ Problogger si bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ karị? Onye ọ bụla ga-na ịpị site na ya pụta… otú ahụ ka m nwetara ụfọdụ mgbanwe na-eme m. Aga m anwale nkọwapụta meta:
Ngwaọrụ dị mfe iji geotag saịtị weebụ gị, blog, ma ọ bụ RSS. Tinye adreesị anyị ga-ewepụta koodu iji mado na saịtị gị, blog ma ọ bụ ndepụta RSS.
Olileanya, a obere edit ga-eme ka ọtụtụ ndị ọzọ na-enyocha ịpị site na m na saịtị na- Geotag gị Blog karịa asọmpi!
Achọpụtakwara m ọtụtụ ọchụchọ maka ngwaọrụ iji kpochapụ adreesị gị ma ọ bụ chọta zip maka adreesị ka m wee tinye ụfọdụ verbiage iji mee nke ahụ! Anyị ga-ele anya hụ ihe nsonaazụ ya n'ime izu ole na ole. Ebughachiri m saịtị ahụ na Google ka m degharịa ya ugbu a agbanweela peeji ahụ.
Ọ bụrụ na ịmalitere aha gị na-akpakọrịta, ị na-atụ ụjọ na ị ga-eji ọkwa gị?
Ọ bụrụ na ọ nweghị onye na-akụ, kedu ihe ọma bụ nnukwu ọkwa?
Ahụtụbeghị m ya ebe ọ bụla webụsaịtị m maara ma ọ bụ soro na-họọrọ maka
isi okwu na ọ dịghị onye pịa njikọ ha
Nke ahụ na-adọrọ mmasị - ị ga-enwerịrị ụfọdụ ndị odee ọdịnaya. Anyị enweela ndị ahịa ole na ole ka anyị gafegoro ọzụzụ dị elu maka ịba ụba CTR nwere aha mgbasa ozi na-akpali akpali n'ihi na CTR ha dị obere na SERPs. Agaghị m ekwu na ọ na-ahụkarị - mana ahụla m ọtụtụ ihe atụ ya. Zuru oke biputere ya :).
Enwere m ekele maka nghọta. N'ezie, m ga-eleba anya na nke a
Ekwenyere m na obere ihe dị ka nke a bụ ka weebụsaịtị kewapụrụ onwe ha ịbụ
ịga nke ọma online. Achọpụtara m na ọtụtụ ndị maara ABC n'ihi na ha
were klas na-amaghị otú e si mpi megide ndị ọzọ na webụsaịtị ndị nwekwara